Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Carolina Cup Festival na -adọta n'ime ndị kacha ewu ewu na -efe efe
Iko Carolina bụ mmemme mmemme ụbọchị anọ nke na-egosipụta agbụrụ asaa, nzukọ ọmụmụ na ụlọọgwụ site na uru, ihe ngosi ngwaahịa na ngosi.
Tristan Boxford, onye isi oche nke APP kwuru, "Iko Carolina bụ naanị otu ndị ọrụ Paddlesurf ọkachamara na mmemme na 2021." “Ihe omume a ga -eji ego APP nweta ma anya ma sprints. Agbanyeghị, n'ihi ọnọdụ pụrụ iche, anyị anaghị agagharị n'ihu njem mba ụwa n'afọ a. ”
A nabatara APP ma kweta na ya bụ njem nlegharị anya mba ụwa maka ịnya ụgbọ mmiri nke otu kọmitii Olympic mba ụwa na -ahụ maka egwuregwu na sọọfụ.
Ọ dị mma nke nwere oke osimiri na oke osimiri, agbụrụ na ihe omume niile na -amalite ma na -akwụsị na Blockade Runner Beach Resort, ebe egwuregwu Carolina Cup. Ihe omume na -amalite na Nọvemba 4 ma mechie na Nọvemba 7.
N'ịbụ onye nọ n'ọkwa nke abụọ na paddleboard ụmụ nwanyị, Eprel Zilg nke North Carolina kwupụtara atụmatụ ịsọ mpi n'Ọsọ Graveyard dị egwu nke Carolina Cup dị kilomita 13 na Wrightsville Beach. Zilg kwuru, "Enwere m atụmatụ ịgba ọsọ na Nọvemba." "Ọ bụ otu n'ime agbụrụ kacha ibu n'ụwa na otu nkuzi kacha sie ike."
Zilg kwuru, "Ọsọ [Graveyard] bụ ihe pụrụ iche, na -eduga gị n'oké osimiri na mmiri intracoastal, na -agagharị n'ọnụ ụzọ abụọ, na -alụ ọgụ, na -abanye ma na -apụ site na sọfụ." “Ọ bụ nnwale dị mma nke ihe niile onye na-akwọ ụgbọ mmiri nwere, na ụdị nne anaghị adị mma mgbe niile. N'èzí ụfọdụ asọmpi mpaghara sọọfụ raara nye, Graveyard Race dị n'ebe ahụ maka ihe isi ike, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị kwụsị ọgụ siri ike. Ọ bụkwa ọkara ọkara marathon, yabụ na igwu ihe dị adị. ”
Ndị ọzọ batara na mbụ gụnyere Casper Steinfath, onye mmeri ụwa na -achị achị na ngalaba ụmụ nwoke. N'ịbụ onye tolitere n'ime obodo ịkụ azụ na Denmark, Steinfath zụlitere agụụ maka egwuregwu mmiri tupu ọ nwee ike ịga ije, na -anọ n'elu ụgbọ mmiri nna ya. Ugbu a 28, Steinfath bụ otu n'ime ndị na -eme egwuregwu egwuregwu mmiri kachasị mma, ebe ọ meriri ọtụtụ mmeri na asọmpi n'oge ọrụ ya.
N'afọ 2020, Steinfath bụ onye mbụ kwụsịrị ịkwọ ụgbọ mmiri gafere Skagerrak, kilomita 130 nke mmiri aghụghọ na-ekewa Denmark na Norway.
Onye France na -akwọ ụgbọ mmiri bụ Arthur Arutkin, onye nọ n'ọkwa nke abụọ n'ụwa, na Titouan Puyo nke New Caledonia, onye nọ n'ọkwa nke asaa, edebanyela aha maka asọmpi a - yana ọtụtụ ndị ọzọ na -abịa.
Seychelle Webster, onye mmeri ụwa na -achị achị na ngalaba ụmụ nwanyị APP, ga -aga iko Carolina ma na -ezube ịnye ụlọ ọgwụ, dị maka ụbọchị ngosi, ma nyere aka n'oge asọmpi ụmụaka. Seychelle kwuru, "Achọghị m ime atụmatụ ịgba ọsọ n'afọ a." “Iko Carolina bụ otu n'ime asọmpi kachasị mkpa m n'afọ. Mana ugbu a, ihe kacha mkpa na ihe ịma aka kacha atọ m ụtọ bụ na m dị ime. Yabụ, nke ahụ bụ ihe m lekwasịrị anya maka afọ a, agaghị m asọmpi. ”
Seychelle kwukwara, "Asọmpi ma ọ bụ na ọ bụghị, n'izu a na Wrightsville ga -atọ ụtọ nke ukwuu. "Enwere m obi anụrị ịhụ na ịchụkwudo onye ọ bụla na ịkwado APP na Carolina Cup n'agbanyeghị nsogbu ụwa niile."
Wrightsville Beach Paddle Club haziri Carolina Cup ma ụlọ ọrụ Kona Brewing gosipụtara ya. Ọrụ ebere enyere maka iko Carolina bụ Nourish North Carolina, 501 (c) (3) nke na -anaghị akwụ ụgwọ nke ebumnuche ya bụ inye ụmụaka agụụ na -agụ nri nke ọma, na -enyere ha aka inwe ihe ịga nke ọma na klaasị na obodo ha.